RSWO – Gurraandhala 16, 2019: Koree Teekiniikaa, Abbootii Gadaafi Maanguddoota; WBO Hiikkachiisuuf/Mooraatti Galchuuf gara Lixaafi Kibba Oromiyaa’tti Bobba’anii jiran Ilaalchisuun Yaada Uummataa – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioRSWO – Gurraandhala 16, 2019: Koree Teekiniikaa, Abbootii Gadaafi Maanguddoota; WBO Hiikkachiisuuf/Mooraatti Galchuuf gara Lixaafi Kibba Oromiyaa’tti Bobba’anii jiran Ilaalchisuun Yaada Uummataa
RSWO – Gurraandhala 16, 2019: Koree Teekiniikaa, Abbootii Gadaafi Maanguddoota; WBO Hiikkachiisuuf/Mooraatti Galchuuf gara Lixaafi Kibba Oromiyaa’tti Bobba’anii jiran Ilaalchisuun Yaada Uummataa
Haal duree dhimma araaraa <#ABO fi Mootummaa Itoophiyaa irratti ajajni #WBO> Z/K dhiyeessee akka asii gadii ta’a.
Kabajamoo Abbootii Gadaa fi Koree Teeknikaa kabajaa fi jaalala oromummaa isiniif qabnu isiniif ibsina. Gara yaada qabiyyee dhimma xalayaa keenyaa irratti qabnu akka asii gadiitti isin beeksifna.
Erga labsiin araaraa 24/1/2019 #ABO_fi_mootummaa Itoopiyaa jidduutti murtiilee garagaraa Magaalaa Ambootti fudhatameen booda, RIB humna lafoo fii xiyaaran socho’uudhan magaalaa hanga baadiyyaatti WBO fi uummata oromoo irratti Lola banuun goleelee Oromiyaa hunda jeeqaa jiru. Gochaa suukaneessaa RIB erga labsiin araaraa labsamee as ,Godinaalee Gujii bahaa fi dhiyaa Wallagga bahaa fi Wallagga Lixaa akkasumas Iluu Abbaa Booraa Giddugala oromiyaa keessatti Gochaan raawwataa jiru gochaa gara jabuummaa ti. Keessattuu Gujii Lixaa Aanaa Qarcaa keessatti Jaartii “Dukkee” jedhamtu mana jireenyaa ishii itti cufanii duuban ibiddaan gubanii ollaan akka hin birmanne godhanii ajeesan; shamarraniif Haawwan Oromoo Dirqisiisanii Gudeedan;Wallagga bahaatti ijoollee obbolaa lamaan wal irratti fixan, Godina Booranaa Magaalaa Hiddii Lolaatti Gaafa guyyaa 12/2/2019 misirroo lama kan cidhaa galaniif waayillan isaanii nama shan bakka tokkotti rasaasa RIB dhumuun namoonni heddu madaa’anii kanneen hidhamanii jiru.
Haala sabbni oromoofi WBO bifa kanaan lolamaa jiru keessatti Ajajoota WBO wajjin wal arganii haasa’uun rakkisaa waan ta’eef, Koreen Teeknikaa fi Abbootin gadaa Rakkoo armaan olii hubannoo keessa galchuun, araarichi karaa qajeelaa fii marii baldhaa WBO waliin taasisuuf,nagaa waaraan akka argamuuf qabxiileen armaan gadii guutamuu qaba.
1.walii galtee lola dhaabuu faallessuun”WBO dirqiin hiiksifna” jechuun sakatta’a baldhaa fi duula WBO irratti gaggeessuu dhaabun ,RIB naannoo sochii WBO keessaa akka ba’ee kaambii isaatti deebi’uun walii galtee araaraa hojii irra hanga oolchutti.
2. Koreen teeknikaa fii Abbootin gadaa araara WbO fi Mootummaa Gidduutti ta’u milkeessuuf :-Hooggantoota ‘Qondaaltota,Miseensota, deeggartoota fi sabboontota jumlaan hidhaman gadi lakkisuu, doorsisuun ,ajjeesun dhaanun ,qabeenya isaa gubuun saamuu fi saamsisuun hanga dhaabbatutti.
3.Araara milkaa’e akka ta’uuf:-Waajjira AbO sadarkaa godinaa hanga Gandaattii banuu, ABOn bilisa ta’e biyya keessa socho’ee kaayyoo ABO barsiisuu dammaqsuu fii Mallattoo eenyummaa ABO ibsan soda tokko malee Alaabaa ABO, odaa fi kkf itti fayyadamuun haga danda’amuti.
4.Mootummaan naannoo Oromiyaa Murnoota kaleessa ABO fi WBO irratti yakka diigumsaa fii olola maqaa balleessii raawwachaa tura aangessuun Araara kana waan hin milkeessineef murnoota kanneen aangoo irraa hanga hin kaasinitti.
5.ABOn akka Paartii siyaasaa dhaaba tokkootti sirnaan galmaayee filmaata ykn filannoo keessatti akka hirmaatu ykn dorgomu dura dhaabbachuun hafee wabii hanga argatutti.
6.Koreen Teeknikaa ijaaramte gariin siyaasaa Mootummaa irraa walaba waan hin taanef qaamni walabaa Abo fi Mootummaa Itoophiyaati hin baabsine hanga ijaaramutti.
7.ABOn dhaabaa heeraa, sagantaa siyaasaa fi seeraa ittiin bulmaataa qabu waan ta’eef dhimmoota keessa ABO keessaa harka naqatuun namoota gansiisuu fi dhaabicha diiguf, duulli gaggeeffamu akkasumas ololli maqa balleessii media fi dabballoota mootummaan ABO nyalchiisuf godhamu hanga hin dhaabbatinitti.
8.Rakkoon daangaa oromiyaa saboota biro wajjin qaban baroota dheeraaf dhiigni jigee lubbuun namoota meeqaa itti dhume,rakkoon daangaa Moyyaalee irraa eegalee hanga Cinaaksan ,dhiya oromiyaa fi kaaba oromiyaa harkaa qabu furmaataa maayii argamsiisuf ABOn hanga keessaa qooda hin fudhatinitti.
9.Qabsoo Oromoo xiqqeessuf jecha dhibdee ABO fii mootummaa Itoophiyaa jidduu jiruu , dhibdee jaarraa tokkoof walakkaa ture , rakkoo sadarkaa naannotti hin ilaalamne, akka rakkoo oromoo fi oromoo jidduu jirutti fudhachyuun qabsoo Oromoo naafessuu fi kolaasudha.Dhibdee guddaa kana furuuf Moonaa Araaraa baldhisuun qaami rakkoo kana walaba ta’ee hiiku hanga utubamutti.
10.walumaa galatti mootummaan Itoophiyaa gochaa farrummaa waggoottan 27n darban uummata oromoo irratti raawwata ture. Addatti immoo erga waliigalteen labsii araaraa labsamee as gochaalen dhiyeenya kana Lixa Oromiyaa, kibba oromiyaa keessumaa gujii lixaa, gujii bahaa fi boorana Hiddii Lolaa keessatti gaafa 12/2/2019 keessatti raawwatameef ,qaamni gochaa kana qindeesse fi raawwate hanga seeratti hin dhiyaatin.
11.WBO Gujii bahaa , Gujii Lixaa fi G/Booranaa keessa socho’u Ajaja WBO zoonii kibbaa jala waan jiruuf, Ajajaaf miseensota gargar qooduf, akkasumas naannummaa fi gosummaa irratti hundaa’un dubbisuu yaaluun hanga hin dhaabbatinitti,walumaa galatti qabxiilee olitti tarreessine mootummaan hanga hojiiti hin hiikinitti waliin haasa’un hiikkaa hin qabu, araara waaraas fiduu hin danda’u.
HB:-Mootummaan,naannoo sochii WBO keessatti WBO fakkeessun badiilee gar garaa ummata irratti raawwachaa waan jiraniif sochii gootan kamuu keessatti rakkoo isin ir
Nuti Akka mootummaatti ABO waliin Araara goone hinqabnu”Araara jedhamus Miidiyaa Hawaasummaa irraati dhageenye jechuun Gaazzeexaa #Addis zemen jedhamutti himeera Jeneraal Biraanuu juulaa.
Mootummaan Naannoo Tigiraayi Waraana Sirriitti Leenjifachaa Jira.